कुँवर घरानको बन्धन तोड्दै दलितको घर पसिन कांग्रेस नेत्री अमृता कुँवर ! – ebaglung.com
कुँवर घरानको बन्धन तोड्दै दलितको घर पसिन कांग्रेस नेत्री अमृता कुँवर !
२०७५ बैशाख २२, शनिबार ११:३१	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ बैशाख २२ । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासकै प्रतिष्ठित घराना हो धागीथुमका कुँवर परिवारको । सार्वजानिक स्थान वाहेक आफुले चाहेर पनि पुरानो पुस्ताको डरले दलित समुदायको घर भित्र पस्न सकेका थिएनन त्यस कुँवर परिवार ।
तर नेपाली कांग्रेस गुल्मीले नै छुवाछुत विभेद् विरुद्ध कडा अभियान छेडेपछि समाजको त्यो बन्धन तोड्ने बाटो खुल्यो त्यस कुँवर परिवारकी वुहारी अमृता कुँवरलाई ।
२०३३ साल देखि २०६३ साल सम्म शिक्षण पेशामा रहेकी कुँवर भन्छिन् –‘ त्यतिका वर्ष सम्म तिनै दलित वालवालिकाहरुलाई काँखमा राखेर बढाएकी थिएँ, घर दैलोका क्रममा उनिहरुको दुख–सुख पनि नजिकबाट नियालेकी थिएँ, शिक्षक भएर मात्रै होईन, वाल्यपन देखि नै मेरो मन भित्र कहिल्लै विभेद थिएन ।
विवाह पश्चात पनि मेरो श्रीमान भेषबहादुर कुँवर पनि शिक्षक नै भएकोले उहाँ र मेरा छोरा छोरी कसैले पनि जातिय विभेद गरेनन । तर सासु ससुरा लगायतको पुरानो पिढीको बन्धन थियो , त्यो बन्धनलाई हामीले खुलेआम तोड्न नसकेकै हो । ’
उनले थपिन–‘जव बैशाख १ गते देखि नेपाली कांग्रेसले जुन ५० दिने महाअभियान छेड्यो तव यो ६४ वर्षको उमेरमा सार्वजानिक रुपमै त्यो बन्धन तोड्न सकियो र पहिलो पटक म दलित परिवाको घरमा बसेर खाना खाएँ, उनिहरुको परिवार संगै रमाएँ । ’
स्थानिय तहको निर्वाचनमा भोट तान्नका लागि धेरै उमेदवार र उनका कार्यकर्ता दलितको घर भित्र पसेर खाना खाए तर रेसुङ्गा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट उप मेयरकी उमेदवार कुँवरले त्यस्तो चुनावी नौटङ्की गर्न चाहिनन् ।
जम्मा सात भोटले पराजित कुँवरले दलितको घर भित्र आफुहरु पस्ने मात्र होईन आफुहरुले पनि दलितहरुलाई आफ्नो घर भित्र पसालेर खान–पिन गराउने सोंच राखेकी छन् ।
उनले आफु मात्र पार्टीको नीति अनुसार रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर १२, उर्लेनी गाउँका विपन्न दलित परिवार अर्जुन बिकको घरमा मात्र पुगिनन् साथमा स्वतन्त्र नागरिक छोरा रमेशलाई समेत लगेर संगै विहानीको चिया नास्ता र दिनको खान खुवाईन् ।
उनि संगै सदियौं देखि छुवाछुत विभेद गर्दै आएका त्यहाँका वस्नेत, टण्डन लगायतका समुदायहरुलाई पनि त्यस दलित परिवारको घरमा बसेर खान खाएका थिए । त्यस उर्लेनी गाउँका दलितहरु अधिकांश नजिकै रहेको ढुङ्गा खानीमा गिटी कुटेर जीविका चलाउँदै आएका छन् ।
त्यहाँका दलितका छोरा छोरीहरुले उच्च शिक्षाको मुख देख्न अहिले सम्म पाएका छैनन् । गैह्र दलितकी छोरी राजीखुशी लिएर हिडेका त्यहाँका एक जना दलित युवालाई भारतको सिमनामा ती युवतीका परिवारले पक्राउ गर्न लगाई चेली वेटी वेचविखनको मुद्दामा अहिले सम्म जेल कोचेका छन् ।
यद्यपी हिजो घरको झ्यालबाट खेतालो भन्न आउनेहरु आज घर भित्रै पसेर खान खाई दिदा उनिहरुले केहि न केहि परिवर्तनको महसूस गरिरहेका थिए । छिमेकी समेत रहेका त्यस वडाका अध्यक्ष कुलबहादुर टण्डन पनि गर्वित हुँदै खान खाई रहेका थिए ।
खाना खाएको भाँडा पनि आफैले बोकेर वाहिर माझ्न लागेको दृश्यले व्दन्दकालका माओवादीहरुको झल्को कांग्रेसजनले दिई रहेका थिए । व्दन्दकालमा माओवादीले त्यसै दलित वस्तीमा राम्रै प्रभाव जमाएको थियो । बस्नेत परिवारमा मेस सञ्चालन गरेर सवै जातजातिलाई एकै साथ खान खुवाउने गरेको थियो ।
शान्ति प्रकृया पछि कांग्रेसले अहिले ल्याएको यो अभियानलाई राजनैतिक ईस्र्या गर्नेहरु वाहेक समतामुलक समाजका पक्षधरहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । कांग्रेसको यो महाअभियान उसै भित्रका लागि पनि चुनौतीपुर्ण रहेको छ ।
विहानै उठ्ने, भगवानको नाम जप्ने र दलितलाई देख्यो कि मुन्टो मर्काउने कार्यकर्ताहरु पहिला कम्युनिष्टहरुलाई साराप्थे भने अहिले कांग्रेस वहुलायो भन्न थालेका छन् । त्यस्ता कैयौं कार्यकर्ताहरुले भरिएको गुल्मी कांग्रेसले यो आँट गरेकै हो ।
पार्टी सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले यो अभियानको कसैले नीति भन्दा वाहिर गए कार्वाही गरिने चेतावनी दिदै आएका छन् । जिल्ला पार्टीको बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टी सचिव खिलध्वज पन्थीले छुवाछुत विभेद् गर्ने नेता , कार्यकर्ताको पार्टी सदस्यता नै खारेज हुने चेतवानी दिएका छन् ।
पार्टीका जिम्मेवार नेता, जनप्रतिनीधिहरु यसरी धमाधम दलितको घर भित्र प्रवेश गरे पछि अव ती ती गाउँहरुलाई छुवाछुत मुक्त गाउँ गाउँ घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? त्यहाँका मठ–मन्दिर लगायतका सार्वाजानिक स्थानमा दलितहरुलाई प्रवेश गराउने कि नगराउने ? दलितहरुले माथी उल्लेखित खेपेका तमाम झुटा मुद्दाहरु सहितका अवस्थाहरुको कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? यो चुनौती पनि कांग्रेसले मोल्नु पर्ने देखिएको छ ।
यस्तो रह्यो बागलुङमा नेपाल बन्दको प्रभाव : लामो दुरीका सवारी साधन चलेनन् !
यो कस्तो बिडम्बना ? गगन थापाको भोजन दलितको चुलोमा, ईश्वरी परियारको घरको दलानमा … !